Madaxda Maamul Goboleedyada oo shiray | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxda Maamul Goboleedyada oo shiray
Shanta Madaxweyne Dowlad Goboleed ayaa shir khadka taleefanka ah xalay yeeshay waxa ayna ka wada hadleen arimaha cakiran ee ka taagan hab-maamulka doorashooyinka.
SOOMAALIYA - Wakiilada Beesha Caalamka ayaa si kala gaar gaar ah maalmihii la soo dhaafay shirar dhanka fogaan aragga ah ee Zoomka la lahaa Madaxda Dowlad Goboleedyada kuwaas oo looga hadlayay qilaafka doorashooyinka.
Shirkaan waxaa diiradda lagu saaray sidii loo abuuri lahaa jawi isku soo dhawaansho iyo is fahan ka dhex dhasha madaxda maamul gobooleedyada.
Madaxweynayaashaan ayaan kulan toos ah yeelan tan iyo shir-kii bishii Sebteember ka dhacay Muqdisho kaas oo heshiis looga gaaray doorashooyinka, hayeeshee ay dowladda Farmaajo hareer martay.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa isku dayaya in xal u raadiyaan is mari waaga ka taagan doorashooyinka, waxayna qorsheynayan in Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada iyo madaxda dowladda ay isu keenaan kulan, ka hor inta aan la gaarin 8 Feebaraayo.
Dowladda uu hoggaamiyo Farmaajo ayaa wajaheysa cadaadiskii u weynaa oo kaga imaanaya beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaana looga digay in ay dalka ka qabato doorasho aan la isla ogolayn.
Mudda xileedka sharciga ah ee Farmaajo ayaa ku eg 8 Feebaraayo 2021, ilaa hadana ma jiro is fahan laga gaaray muranka ka taagan hab maamulka doorashooyinka.